Zimbabwe's parliament approves $98 million loan from China - CNN.com
Zimbabwe's parliament approves $98 million loan from China
China's Foreign Minister Yang Jiechi with Zimbabwean president Robert Mugabe during his visit on February 11, 2011 to Harare.
The money will go to building a defense college
Some members of Zimbabwe's parliament oppose the deal
They argue that the poverty-stricken country should spend the money in other ways
Harare, Zimbabwe (CNN) -- Zimbabwe's parliament has ratified a 20-year $98 million loan from China to build a defense college, despite objections from members of Prime Minister Morgan Tsvangirai's party that the poverty-stricken country should prioritize the spending in other ways.
Zimbabwe's minister of defense, Emmerson Mnangagwa, told parliament that the college would offer "specialized military training and learning of security issues" taught by senior officials in defense forces and civilians both in the country and from abroad.
China has become a close ally of Zimbabwe, standing by it while the West ostracizes President Robert Mugabe for the long-term leader's poor human rights record.
In 2008, China vetoed a U.N. Security Council resolution seeking sanctions against Zimbabwe.
Earlier this year, the visiting Chinese vice premier, Wang Qishan, signed about $700 million in loan agreements with Zimbabwe.
The loan was the biggest international deal in years for Zimbabwe, which continues to be shunned by the West for its failure to service its external debt which is about $7 billion.